DEG DEG Ciidanka Soomaaliya oo Buux dhaafiyay Xadka Kenya iyo Dowlada Somalia oo Hada Ku Dhawaaqday - Banaadisom
Home Wararka Maanta DEG DEG Ciidanka Soomaaliya oo Buux dhaafiyay Xadka Kenya iyo Dowlada Somalia...
DEG DEG Ciidanka Soomaaliya oo Buux dhaafiyay Xadka Kenya iyo Dowlada Somalia oo Hada Ku Dhawaaqday
Tan iyo maalintii Talaadada ee shalay waxay warbaahinta Kenya qaarkeed shaacinayeen in ciidamada Milatariga Soomaaliya lasoo dhoobay xadka u dhow magaalada Mandheera, xilli xiisad diblomaasiyadeed oo heerkii ugu sarreeyay gaadhay ay u dhaxeyso labada waddan.
BBC-da ayaa u kuur gashay xaqiiqada ku saabsan wararkaas oo aysan ilaa hadda ka hadlin saraakiisha taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha degmada Beledxaawo, Cabdirashiid Cabdi Xasan “Caroog”, ayaa wareysi uu siiyay laanta afsoomaaliga ee BBC-da ku sheegay in xaaladda ay xasiloon tahay.
Beledxaawo – oo dadka qaarkiis ay u yaqaannaan Buuloxaawo – waa magaalada Soomaaliya dhinaca ku heysa Mandheera oo ka tirsan Kenya.
Cabdirashiid wuxuu sheegay in aysan ka warqabin wax dhaqdhaqaaq ciidan ah oo halkaas ka socda.
“Gobolku wuu daggan yahay, wuu xasilloon yahay, wax dhaqdhaqaaq ah oo ka jira ma laha, dadku way nabad qabaan, wax aan kuleyl iyo abaaro ahayn oo hadda laga cabanayana ma jiraan. Magaalada Beledxaawo amni ahaan way daggan tahay, ganacsigu wuu kala socdaa, wax xiisad ah oo la dareemayana ma jirto gabi ahaanba,” ayuu yidhi guddoomiyaha.
Mar aan wax ka weydiinnay waxa ka jira wararka sheegaya in ciidamada milatariga Soomaaliya ay kusoo qulqulayaan Beledxaawo oo xad la wadaagta Kenya ayuu sheegay in ciidankaas ay sanahayn kuwo cusub.
“Ciidamada horay ayey u joogeen, waxayna wateen waajibaad qaran oo laga sugayo, laakiin wax hadda cusub iyo dhaqdhaqaaq milatari ma jiro. Ciidamada hadda halkan jooga aad bay ugu filan yihiin khatar kasta oo dibadda uga timaada.”
Warka ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay milatari soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Kenya – oo warbaahinta faafisay uu ka mid yahay wargeyska afka dheer ee Daily Nation – ayaa soo baxay saacado kaddib markii dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed gabi ahaanba u jartay dhiggeeda Kenya, ayna ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta reer Kenya in ay Soomaaliya uga baxaan muddo 7 maalmood ah gudahood.
Dabayaaqadii bishii November ee la soo dhaafay ayey mar kale soo cusboonaatay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya kaddib markii ay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho ku eedeysay dhiggeeda Kenya in aysan u qaddarineynin sida dal la siman oo kale.
Dowladda Soomaaliya ayaa markaas wadatashi ugu yeertay safiirka Soomaaliya ee Fadhiya Kenya, sidoo kalena waxaa dalkiisa loo diray safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe, oo 2-dii bishan December warfidiyeenka kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay “in Kenya ay noqotay meel ay ku hirtaan mucaaradka damacsan in ay meesha ka saaraan hannaanka dowladeed ee hadda jira”.
“Intii ay Soomaaliya soo kabatay, marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya, si loogu khalkhal galiyo dariska. Laakiin taas baddalkeeda, Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaadho Soomaaliya gudaheeda, lagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu carqaladeeyo dowladnimada dhismeysa ee dalkeenna,” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.
Tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya qaadday waxaa ka mid ah in la joojiyay duullimaadyadii qaadka ee Kenya ay u diri jirtay Soomaaliya, iyadoo ganacsigaas uu xukuumadda Nairobi uga soo xaroodo dhaqaale badan.
Laakiin Kenya ayaa dhankeeda dowladda Soomaaliya ku eedeysay in ay marmarsiiyo aan jirin ka dhiganeyso cudurka Covid-19 si ay ugu mamnuucdo ganacsiga qaadka ee looga soo dhoofiyo Kenya, laakiin wali duullimaadyada qaadka wada ee ka imaada Itoobiya loo oggol yahay inay tagaan Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska The East African.
Inkastoo xiisaddan ugu dambeysay ay ku saabsan tahay arrimaha la xiriira “eedeynta ay dowladda Soomaaliya Kenya ugu jeedineyso faragalinta Jubbaland iyo naas nuujinta siyaasiyiinta mucaaradka” haddana khilaafka labada waddan ayaa dhowr sano ka hor kasoo billowday muranka xadka badda ee ay isku hayaan.
Kiis ay dowladda Soomaaliya ka gudbisay khilaafkaas ayaa hadda hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda adduunka, oo laga dhowrayo inay hal dal u go’aamiso lahaanshaha biyahaas.